chhalphal News - बच्चाले सिक्का, ब्याट्री वा गुच्चा निलेमा के गर्ने ?
बच्चाले सिक्का, ब्याट्री वा गुच्चा निलेमा के गर्ने ?
बुधबार, २३ फागुन २०७४, १७ : ३५
काठमाडौं । उत्सुक र चकचके स्वभाव बच्चाहरूको गुण नै हो । सिक्का, गुच्चा, साना ब्याट्री लगायत अन्य धारिलो बस्तु उनीहरूले मुखमा हाल्छन् । गुच्चा निलेमा गोलो प्रकृतिको हुने भएकाले पेट, आन्द्रा हुदै दिसाबाट बाहिर निस्किन्छ ।
खानेनलीमा सिक्का अड्कियो भने तुरुन्त निकाल्नुपर्छ । पेटको भागमा बसिरहेको छ, अरु लक्षण देखाएको छैन भने ४ हप्ता कुर्न सकिन्छ । तर सिक्काको आकार ठूलो भएमा वा अन्य तिखो,धारितो बस्तु भएमा तुरुन्त निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर सिक्का आन्द्रामा पुगिसकेको भए जोखिम कम हुँदै जान्छ ।
ब्याट्री निलेमा सकेसम्म ४ घण्टाभित्र निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कहिलेकाही बालबालिकाले एसिड निल्न सक्छ । त्यसको सामान्य असरस्वरुप बान्ता हुनसक्छ । तर अन्य असर नदेखिने भएकाले अभिभावकहरूले निको भएको ठानेर उपचार गर्दैनन् ।
एसिडले कालान्तरमा पनि असर देखिने भएकाले बच्चालाई ढिलो नगरी अस्पताल पुर्याउनुपर्छ ।